Kuvaka Pipe Series Series - China Kuvaka Pipe Series Vagadziri, Vatengesi
Yakanakisa kudziya kwemafuta uye kwenguva refu kupisa kupisa Iyo pombi ine yakanaka homogeneity uye yakagadzikana kuita. Kushanda mune inopisa mvura system inovimbisa makore makumi mashanu ekushandisa. Kugadzirwa kwakanaka kwekuita uye yakagadzikana mhando PE-RT pombi haidi kuti ipfuure nepakati-yekubatanidza maitiro, haidi kudzora muchinjiko-unobatanidza degree uye zvakafanana, pane mashoma zvigadzirwa ekugadzira, chigadzirwa chakafanana, uye mhando iri yakatsiga uye yakavimbika. Flexible uye nyore kushandisa Inogona kubatanidzwa ...
Nyaradzo, hutsanana uye hutano Radiation kupisa kupisa ndiyo nzira yakanyanya kupisa. Iyo yekunze yepamusoro tembiricha yunifomu, uye tembiricha yemukati inodzikira zvishoma nezvishoma kubva pasi kusvika kumusoro, ichipa vanhu manzwiro akanaka ekudziisa tsoka dzavo uye kutonhodza misoro yavo. Hazvisi nyore kukonzera kusvibiswa kwemhepo yakasviba. Imba yacho yakachena kwazvo, iyo inogona kuvandudza kutenderera kweropa remuviri wemunhu uye kukurudzira metabolism yemuviri wemunhu, kuti igadzire nzvimbo yekupisa inosangana ne ...
Flame retardant zvivakwa: Zvese zviri zviviri PVC uye PVC-C zvinhu zvine zvakanaka murazvo retardant zvivakwa uye zvinogona kudzimwa nekukurumidza mushure memoto. Yakakwira simba simba: Pombi dzemagetsi dzePVC dzinogona kumira huremu hwe1kg patembiricha ye0 ° C uye inokanganisa simba re2m kukwirira, iyo inoratidza zvizere tembiricha yakaderera yekukanganisa kuita kwechinhu, icho chinonyatso shanda kune zvinodiwa nharaunda yekuvaka. . Kuvharidzira mashandiro: Pombi dzemagetsi dzePVC dzinogona kumira pamusoro penzvimbo dzakakwirira pamusoro ...
Iyo PP-R inopisa uye inotonhorera mvura pombi dzakateedzana zvigadzirwa zvinogadzirwa mukuomerera zvinoenderana nematanho epamusoro eiyo IS09001 mhando sisitimu. Izvo zvigadzirwa zvinosangana zvizere ne GB / T18742.1, GB / T18742.2, GB / T18742.3 uye GB / T17219 hutsanana. PP-R inopisa uye inotonhora pombi yemvura chigadzirwa chitsva chinowanzo shandiswa munyika dzakabudirira mupasi nhasi. Iyo inoshandisa homogeneous fusion tekinoroji mune anopisa uye anotonhora emvura ekufambisa mapurojekiti. Yaro yakazara yehunyanzvi mashandiro uye ehupfumi zviratidzo ...
Zvakanakisa mumuviri uye zvemakemikari zvivakwa: Zvipombi uye zvakagadzirwa zvakagadzirwa nePV zvine ngura inodzivirira, yakasimba simba simba, uye yakaderera fluid kuramba (30% yakakwira kuyerera chiyero kupfuura yakakanda mapaipi esimbi akafanana caliber 6). Hupenyu hwakareba hwekukwegura (zvinoenderana neyedzo bvunzo yeiyo Ministry yeKuvaka, iyo hupenyu hwebasa iri 40-50), inyaya yakanaka yekuvakira drainage uye chemakemikari tsvina. Lightweight uye inoshanda, nyore kuisa: iyo uremu inongova 1/7 yeiyo imwe dhayamita yakakanda simbi pombi, iyo c ...
Sevha zvigadzirwa zvakasarudzika uye kurasikirwa kwakadzika: HDPE mapaipi uye fittings yeyakajairika kupisa-kunyauka kubatana inguva-imwe yekubatana, uye izvo zvakagadziriswa hazvigone kushandiswazve. Iyo groove yekubatanidza nzira inogona kubviswa, zvikamu uye mapaipi anogona kushandiswazve, kushandisa zvakazara zviwanikwa, kuchengetedza simba uye manpower uye zviwanikwa zviwanikwa zvinodiwa kune yechipiri kugadzirisa; panguva yekumisikidzwa, mapaipi eHDPE akabatana nemiromo yakati sandara, pasina zvikamu zvinopindirana. Inofananidzwa nedzimwe nzira dzekubatanidza, iyo ...